Maxay Somaliland Ka Tiri Nabadeynta Ceel Afweyn (War Ayaan Idinkaga Wadnaa) – XOGMAAL.COM
Maxay Somaliland Ka Tiri Nabadeynta Ceel Afweyn (War Ayaan Idinkaga Wadnaa)
Somaliland ayaa qodobbo hordhac u noqonaya dedaallada loogu jiro nabadaynta deegaannada Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag oo colaadi ku dhexmartay beelo halkaasi wada ka dega ka soo saartay deegaannadaas.
Madaxweyne-ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo wefti oo hoggaaminayo oo ka kooban culimo iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin guddoomiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo ku sugan Ceel-Afweyn, ayaa sheegay qodobbo ay ka mid yihiin in aan la ogolayn cid hubaysan oo aan ciidamada dawladda ahayn.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay in dowlad ahaan ay garteen in la kala qaado kooxaha hubeysan ee degaanadaas colaada ku dhexmartay waxaana uu xusay ka dowlad ahaan inay ammaanka la wareegeen.
Guddoomiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay dhinacyada ay dirirtu dhexmartay inay u hogaan samaan waan waanta iyo ergada nabadda.
Madaxweyne-ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa ugu dambeyn halkaasi ka sheegay Afar qodob oo lagu adkeynayo nabadda looguna gogol xaarayo shirweynaha nabadda ee degaankaasi.
Wuxuu sheegay Madaxweyne Saylici qodobadaasi inay kala yihiin in ciidama beeleedyada ay ku kala sugnaadaan meelihii loo qorsheeyay, in ciidamadaas meeshii loo qorsheeyay meel aan aheyn loo aqoonsanayo inay yihiin dagaal oogayaal, in dhaqdhaqaaqyada ciidama beeleedyada ay masuul ka yihiin ciidanka Somaliland iyo in ilaalinta nabadgelyada ay tahay danta guud.